गगनको गनगन - BP Bichar
चाहेर नचाहेर उमेरसँगै मानिसमा मानसिक र शारीरिक गिरावट आउँछ । राजनीतिमा उमेर, लिङ्ग, जाति, वर्ग र यौन जस्ता विशेषताले निर्वाचित नागरिकको व्यवहार र नीति निर्माणमा प्रभाव पार्छ । बुढाहरू पनि यही समाजका अंग भएकाले राजनीतिमा संलग्न रहनु उनीहरूको नैतिक दायित्व हो ।राजनैतिक लक्ष्य र आदर्श हासिल गर्नका लागि आउने चुनौतीहरूको सामना गर्न लचिलो हुनुपर्दछ। कसले बनाउने भन्दा पनि कसरी बनाउने भन्ने चिन्ताको विषय हो । उनीहरू यदि परिवर्तनको चाहना राख्छन् भने गुटको पछि नलागेर युवाको मात्र समूह बनाएर छुट्टै चुनाव लड्न किन सक्दैनन् ?
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत, अव को बन्ला प्रधानन्यायाधीश ?
वीपी विचार राष्ट्रिय समाजको राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी जेठमा गर्ने तयारी